I-UIP500hdT - Ukucutshungulwa kwezimboni ku-Scale Encane - iHielscher Ultrasound Technology
Iprosesa ye-ultrasonic i-UIP500hdT (20kHz, i-500W) iyinhlangano yebhizinisi yezimboni yokuhlola umshayeli kanye nokucubungula okuncane kwamanzi. Phakathi kwezicelo ezivame kakhulu ze-UIP500hdT yi-homogenization, ukusabalalisa, i-emulsification, ukuhlukaniswa kwamangqamuzana nokuphendula kwesimo sonochemical. Ukuboniswa kombala ogcwele, ukulawula okukude kwesiphequluli, ukulandelwa kwedatha okuzenzakalelayo kwi-SD / USB ComboCard ehlanganisiwe kanye nezinzwa zokushisa nokucindezela kukunika ukulawula okugcwele kwenqubo kanye nokuthuthukiswa kokusebenza okukhulu.
I-UIP500hdT isebenza kumvamisa we-ultrasonic we-20kHz. Amaza e-Ultrasonic kule mvamisa enza i-an cavitation okukhulu ezinkolweni. Imiphumela yokucwaninga ingasetshenziselwa izicelo eziningi, njenge: Emulsifying, Ukuhlakazeka, I-homogenizing, cell ukuphazanyiswa kanye nokususwa, i-deagglomeration, futhi i-degassing.
I-UIP500hdT ingasetshenziswa ngezesekeli eziningi, njenge-sonotrodes ehlukahlukene, ama-boosters, namaseli okugeleza. Ukuze kusetshenziswe ama-batches amakhulu kunama-5 amalitha, ngokuvamile siyancoma ukuthi sebenzisa i-reactor cell cell (i-flow mode) ukufezekisa ukuvumelana okuphakeme kokusebenza. Uma isetshenziselwa i-sonication yamanzi okugeleza ngendlela yokugeleza, i-UIP500hdT ingajwayelekile phakathi kuka-0.25 no-2.0L / min (Izinga langempela lizoxhomeka kuhlelo lokusebenza). Njengamadivayisi ethu onke, i-UIP500hdT ingaqhutshwa amahora angu-24 ngosuku (24h / 7d). Ngakho-ke, lokhu kusetha kungacubungula cishe. 0.5 kuya ku-3m3 ngosuku. Ukuze uthole ukukhiqizwa okuphezulu kokukhiqiza, sincoma ukusebenzisa noma iyiphi yamadivayisi alandelayo:
I-UIP500hdT nge-flow cell
I-Power Ultrasound ene-Full Process Control
Amandla we-ultrasound yisisombululo senqubo yezicelo ezihlukahlukene zamanzi, njenge emulsification, kuyizinhlayiyana Usayizi ukunciphisa, ukugaya noma ukuqedwa. I-UIP500hdT inikeza amagagasi amakhulu e-ultrasonic enza i-cavitation eqinile. I-cavitation ye-Ultrasonic kanye nemikhosi ekhishwayo ekhishwayo igcwalisa imisebenzi edingayo ngaphandle kwezinkinga. Ukuze kuqinisekiswe ukungahambisani inqubo yekhwalithi, hhayi kuphela amandla angempela e-ultrasound akhululwe kubalulekile, kunalokho yonke imigomo yenqubo ebalulekile kumele ilawulwe. Isizukulwane esisha se-hdT ultrasonic processors kwenza umsebenzisi asebenze uhlelo lwe-ultrasonic nge-touch ukubonisa noma isiphequluli sokulawula kude. Yonke imigomo yenqubo efanele – ezifana amplitude, isikhathi sonication, izinga lokushisa kanye nokucindezela – ziqoshwa ngokuzenzakalelayo futhi zigcinwe njengefayela le-CSV kwi-SD / USB ComboCard edidiyelwe.
Ngaleyo ndlela, i-UIP500hdT entsha inikeza amandla afanayo e-ultrasound njengalokhu eyandulela u-UIP500hd, kodwa ihamba phambili ngobubanzi obanzi bezinye izici ezengeziwe, okwenza inqubo ye-ultrasound ibe yinkinga kakhulu yomsebenzisi. Kusukela ekubukweni kokusebenza, ukulawulwa okuqondile kwazo zonke izinqubo zemishini ye-ultrasonic yimisebenzi esemqoka ephelele.
Ama-watts angu-500 amandla ultrasound
eyakhelwe ukusebenza okukhulu
umbukiso wokuthinta umbala
Umbala wokuthinta isikrini
Isikrini sokuthinta ezinemibala yisithuthukisi esikhulu okwenza le divayisi ibe yinto engcono kakhulu yomsebenzisi. Isikrini sokuthinta-nethinethi-senzeka senza kube lula ukuphatha futhi kuqinisekisa ukusetha okunembile kwemigomo yokusebenza kanye nokuboniswa kokusethwa kwamandla we-ultrasound. Imenyu yokulawula idijithali inembile ukusebenzisa futhi ihlanganisa imenyu yezilungiselelo ezihleliwe ngokucacile. Isimo se-amplitude / amandla kanye nemodi ye-pulse ingashintshwa yi-slider touch-slider (ene-1%, 5% noma i-10% ye-snap). Umsebenzisi uthatha isinqumo, uma ekhetha ukuboniswa kwe-amplitude namandla njengama-bargraphs ezinemibala noma ukumelwa kwamanani. Ukuboniswa kungashintshwa kusuka kwimodi yokubuka evamile ibe yimodi ye-NUMBER yeBIG, lapho ukungafani okuphezulu nokukhulula kwefonti kunciphisa ukufundwa kwayo.
Ngenxa yesikhombimsebenzisi sayo sewebhu se-LAN, i-UIP500hdT ingalawulwa ngokusebenzisa noma yisiphi isiphequluli esivamile, njenge-Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla, i-mobile IE / Safari. Ukuxhumeka kwe-LAN iyi-ipulaki elula ye-plug-n-play engafuni ukufakwa kwesofthiwe. Idivayisi ye-ultrasonic isebenza njenge-DHCP iseva / iklayenti kanye nezicelo noma ibeka i-IP ngokuzenzakalelayo. Idivayisi ingaqhutshwa ngokuqondile kwi-PC / MAC noma isebenzise inkinobho noma router. Ukusebenzisa i-router engenayo i-wireless ngaphambili, idivayisi ingalawulwa kusuka kuma-Smartphones amaningi noma kumakhompyutha we-tablet, isib. I-Apple iPad. Ukusebenzisa ukuthunyelwa kwe-port ye-router exhunywe, ungalawula i-UIP500hdT yakho nge-intanethi kusuka noma ikuphi emhlabeni – usebenzisa i-smart-phone yakho noma ithebhulethi njenge-remote remote control.
I-UIP500hdT ingaqhutshwa futhi ilawulwe nge-LAN (inethiwekhi yendawo yendawo, bheka ibhokisi elungile) elenza kube lula ukusebenza futhi ivumela ukucubungula okuguquguqukayo okuphezulu. Yonke imininingwane yenqubo ye-sonication ibhalwe ekhadini le-SD / le-USB, ngokuzenzakalelayo. Inzwa ehlulwayo ibeka izinga lokushisa unomphela. Inzwa yomshoshaphansi etholakalayo ngokwanele ingafakwa ngokungeziwe ukuze irekhodile ingcindezi.
I-UIP500hdT ikhona eyakhelwe ukukhiqizwa kwezohwebo futhi ufeze izindinganiso zezimboni. Umklamo wayo onamandla, ohlala njalo uye waboniswa ekufakweni okuningi kwezentengiselwano emhlabeni jikelele lapho kusetshenziselwa khona ukukhiqiza nokusebenza okukhulu. Le prosesa ye-ultrasonic idinga kuphela kakhulu isondlo esincane, kulula ukufaka nokulula ukuhlanza nokuhlanza. Izigameko ezikhethekile ze-flow cell ezithobela i-CIP ethuthukile (ihlanzekile-indawo) kanye nezidingo ze-SIP (inzalo-in-place) nazo ziyatholakala. I-transducer ye-UIP500hdT ikhona Ibanga le-IP65, ukuze ifakwe ngaphakathi izindawo ezidinga. I-transducer ingakwazi ukusingatha ukungcola, uthuli, umswakama, ukusebenza ngaphandle njll, kanti i-generator ingafakwa kude kude kwenye indawo.
Amadivaysi ethu e-ultrasonic ane-kakhulu ukusebenza kahle ekuguqulweni kwamandla kagesi abe yizingcingo zomshini we-sonotrode, ukuze abathengisi be-bench-top ultrasonicators bethu babe nezindlu ezivaliwe. Awekho ama-slits e-ventilation ku-case transducer. Njengoba ukulahleka kwamandla, okwakungabangela ukushisa emzimbeni we-transducer evaliwe kakhulu, akukho ukupholisa okuphoqelelwe, okufana nomoya ocindezelweyo noma amanzi adingekayo. Nokho, iqiniso elibaluleke kakhulu yilokho amandla engeziwe liguqulwa libe amaza e-ultrasound ku-liquid, okuholela ku-a sonication okukhulu kakhulu. Ukusebenza kahle kwamandla we-UIP500hdT kufinyelele. 80-90% kusuka ku-plug yamandla ku-liquid (chofoza esithombeni ngenhla ukuze ukwandise ishadi).
I-UIP500hdT ingasebenza ngokugcwele ku-500W. Amandla adluliselwa ku-amplitude elawulwayo, ukuze ukufudumala kwezidakamizwa ze-ultrasonic kwi-sonotrode kuhlale ngaphansi kwazo zonke izimo zomthwalo (isib. Ekucindezeleni okuguqukayo, viscosities njll). Ungashintsha ukuphakama okuvela ku-20 kuya ku-100% ku-generator nangokufaka esinye sezimpondo ezihlukahlukene ze-booster. I-amplitude ekhethiwe iqhutshwa njalo, ngenkathi iveza noma iyiphi into kunoma yikuphi ukucindezela. Ngalokho unakho ukulawula okugcwele phezu kwepharamitha ebaluleke kunazo zonke ye-ultrasound: Ukulinganisa.
I-Industrial Ultrasonic Processor UIP500hdT ama-watts angu-500
ehlanganisa i-transducer ye-ultrasonic kanye ne-generator, imvamisa ye-ultrasonic 20kHz, uhlelo lokuvama lokuvamisa okuzenzakalelayo, i-amplitude engu-25 micron, i-amplitude eguquguqukayo kusuka ku-20 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, i-transducer ibanga le-IP64, ukulawulwa kwe-digital, ne-touch-screen screen (Izinsuku ezingu-0.1 kuya kwezinsuku ezingu-99), ukuvalwa lapho ukufaka amandla okugcina kufinyelela: Ws, Wh, kWh; ukulinganisa okuzenzakalelayo uma kunesidingo: ukuzimisela kwamandla angenalutho okuthembekile okukhulisa amandla amandla okukhipha amandla okufaka amandla, ukurekhoda kwedatha: ukuphakama kwedatha, amandla, isikhathi, izinga lokushisa kwi-SD / USB ComboCard yangaphakathi (1GB), ukubonisa nokulawula okude ngokuphequlula ku-PC noma i-MAC ngaphandle ukufakwa kwesofthiwe, ne-sensor yokushisa, izinga lokushisa: ° C, ° F (-50 ° C kuya ku-200 ° C), ukuqapha izinga lokushisa: ukushintshashintsha okuguquguqukayo / amaphuzu (-50 ° C - 200 ° C), i-3m transducer cable kuya generator, ngamathuluzi okhulayo, titanium phondo ngentambo female M14x1
i-reactor ye-stainless steel ehlulekayo, max. imigoqo engu-10, ye-UIP500hdT eya ku-UIP2000hdT kuhlanganiswe ne-sonotrode flange nokuma kwe-ST2, i-NBR izindandatho, izixhumi ze-tube (1/2 intshi) ne-clip